Twobọchị abụọ gara aga ka ihe ịtụnanya ihu igwe dị na mpaghara Cantabrian juru mpaghara Malaga anya: ele ahụ. Ndị a bụ ifufe siri ike nke nwere ike iru kilomita 60 kwa awa kpatara ikuku nke igwe oyi na iru mmiri nke na-eme ka iru mmiri rute 75%.
Ihe omume nke mere na Malaga pere mpe karia nke na-eme na ugwu Site na peninshula, ya mere a na-akpọ ya mini gale.
Gales bụ ụdị ọrụ ihu igwe nke mpaghara Cantabrian ha na-ejikwa ifufe dị ike na-esonyere na mgbanwe mberede na okpomọkụ na oké ifufe na-atụghị anya ya. Na Malaga, ihe omume a adịchaghị ike ebe ọ bụ na ifufe erutela kilomita iri ise n'otu awa ma ọnọdụ okpomọkụ agbadala site na 50 ruo 5 degrees. Ọ bụ ya mere na mpaghara Mediterenian, a maara ha dị ka obere veranda.
Na mpaghara a, ihe dị otú a na-eme na mberede ikuku nke na-efe site na ọdịda anyanwụ gbanwere na mberede ifufe ọwụwa anyanwụ. Igwe oyi na-abanye n'ebe ọwụwa anyanwụ na mpaghara Mediterenian nke peninshula na-eme ka ikuku ikuku na oke iru mmiri dị otú ahụ. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, ekwesịrị ikwu na okwu ahụ galerna sitere na French galerne ma na-ezo aka na ifufe nke si n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ.
Ndị bi na Malaga ebiela ma taa ahụhụ n'oge ụbọchị a dị iche iche ihu igwe. Oge izu ụka tara ahụhụ nke a na-akpọ terral na okpomọkụ dị elu karịa ogo 30 ma nwee mmetụta na-egbu egbu na gburugburu ebe niile mgbe ụbọchị abụọ gara aga, ha tara ahụhụ site na obere gale na ọgwụ dị ike nke oge na oke ọdịda okpomọkụ. Ndị a bụ ihe atụ abụọ kachasị mma nke ọnwa opupu ihe ubi.